OPS ထိရောက်သောသန့်စင်ဆေးပြားများ အကောင်းဆုံးကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အရည်
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ / Effervescent သန့်ရှင်းရေး Tablet များ
Wiper အရည်အတွက်စုစည်းထားသောကားရှေ့အဝတ်လျှော်ပြားများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ရာသီဥတုတစ်ခုလုံးကိုရှေ့သို့မျက်နှာပြင်အ ၀ တ်လျှော်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည် (32 အောက်တွင်မသုံးပါ)၊ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သန့်ရှင်းသောစွမ်းရည်ရှိသည်။
4L ရေရှိတက်ဘလက်တစ်ခုသည် 4L အဝတ်လျှော်အရည်နှင့်ညီမျှလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်အတွက်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန်အစွန်းအထင်းများပြိုကွဲစေရန်ဇီဝအင်ဇိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အဆိပ်မဟုတ်သော,
♣ 1 တက်ဘလက် + 4L ရေ = 4L ကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အရည်!
♣အပြာရောင်၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ စျေးနှုန်းသက်သာပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
♣စသည်တို့ကိုနို့ရုပ်ရှင်, အရောင် box ကို alum ရုပ်ရှင်, bt ထုပ်ပိုး
ယုံကြည်စိတ်ချရသော windshield wiper fluid ကိုရွေးချယ်ရန်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
အဆိုပါပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရေရှည်သုံးစွဲခြင်း, သင့်ကားရဲ့ windscreen ပြီးသားနှင့်များစွာသောခြစ်နှင့်အတူမှုန်ဝါးနေပါတယ်။
အခွင့်အာဏာဌာန၏စာရင်းဇယားများအရ, တိုက်မှုမတော်တဆမှုအတွက်, သူတို့ထဲက 70% windscreen တို့တွင်ဆင်းရဲရူပါရုံကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြတယ်!
မျက်နှာပြင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သို့မဟုတ် lubricated မဟုတ်ပါလျှင်, နေ့တိုင်းနေရောင်ခြည်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာအတွက်ထိတွေ့မှုကြောင့် windscreen Wiper အိုမင်းရန်လွယ်ကူသည်
ကကော်တိပ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုအတိုကောက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူနှင့် windscreen သန့်ရှင်းခံရဖို့ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်!
တကယ်တော့ သင့်ကိုယ်ပိုင်ကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အရည်စေ ဒါကြောင့်လွယ်ကူသောအမှုအရာပါ!
အက်ဆစ်မိုးရွာရွာနေဖြင့်ချေး • အပူချိန်မြင့်မားသောကြောင့်ပျက်စီးခြင်း•အထီးကျန်ခြင်းနှင့်လေထဲတွင်သဲသောင်ပြင်နေခြင်း•အော်တိုကုန်ခန်းခြင်း
ဤအခြေအနေများအမြဲတမ်း windscreen Wiper မှအလေးအနက်ဒဏ်ရာစေ၏။
ကားရှေ့မှနျ Wiper အရည်၏ဆင်းရဲသားရွေးချယ် windscreen အပေါ်ဖုန်သို့မဟုတ်မြူတစ်စက်တစ်အလွှာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
အဲဒီအစားတွေနဲ့ကားကိုဆေးကြော၏ အားလုံးရာသီကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အရည်, etc ပန်းကန်ဆေးစက်မှုန့်, အဝတ်လျှော်မှုန့်, အသုံးပြုသနည်း
အဆိုပါမှုန်ရေမွှား nozzle ခုံဖိနပ်, ရော်ဘာပိုက် Corrode, အ windscreen Wiper ခိုင်မာစေခြင်း, ကားရှေ့မှနျမျက်နှာပြင်ကိုခြစ်။
Ops Effervescent သန့်ရှင်းရေး Tablet များ, အကောင်းဆုံးကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အရည်ပါစေ။
အဓိကအားသာချက်နှင့်အားသာချက် ၇ ခုသည် windshield washer tablet ၏အသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။
♦ ရေနံရုပ်ရှင်လျင်မြန်စွာရှင်းလင်း ရေအစွန်းအထင်းမရှိဘဲ windscreen ၏, နှင့် windscreen Wiper ၏ဘဝတိုးချဲ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ windscreen Wiper အဘို့အကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး:
♦ဒီထုတ်ကုန်၏ Long ကသက်တမ်းအသုံးပြုမှုမှပူးတွဲအရှင်ပိုကောင်း, အ windscreen Wiper ပျော့ပြောင်းနိုင်ပါတယ် ကြာကြာဝန်ဆောင်မှုဘဝပေး windscreen နှင့်။
N 1PC အဝတ်လျှော်တက်ဘလက် = 4L wiper fluid, ကားထဲတွင်နေရာချပါ။
ရေနံအားဖြင့်ယူဆောင်လာအဘယ်ကြောင့်ဒုက္ခဝေးတိုက်မှဒီထုတ်ကုန်အသစ်မသွင်း, ရေနံရုပ်ရှင်မဖယ်ရှားနိုင်ပါ♦ ရုပ်ရှင်
♦ထို windscreen သန့်ရှင်း traceless ပိုမိုပွင့်လင်းသည်သင်ပိုမိုလုံခြုံစွာမောင်းနှင်ကြကုန်အံ့။
ဘက်စုံသုံးနှင့် All-In-One အသုံးပြုမှု:
♦ client ကိုမဆိုရာသီအတွက်အသုံးပြုရန်ဘာပဲ, ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့ကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အရည် လည်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်!
1 ။ ကားကိုရေနွေးအိုး၏အဖုံးကိုဖွင့်ပြီးသန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူပါကဖြည့်ပါ
2 ။ အဆိုပါ effervescent တက်ဘလက်ထဲကယူနှင့်ရေနွေးအိုးထဲမှာထည့်သွင်း
3 ။ ကားအတွင်းအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖွင့်မည်နှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုလက်စသတ်နေသည်။
သင်မြင်တဲ့အတိုင်း, အိမ်လုပ်ကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အရည် လွယ်ကူသောသို့မဟုတ်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ပါသလဲ အဖြေရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပါ!
ယုံကြည်စိတ်ချရသော windshield အဝတ်လျှော်ဆေးပြားပေးသူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ဆက်သွယ်ရန် ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်!
Effervescent သန့်ရှင်းရေး tablet များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်စာရွက်
Effervescent သန့်ရှင်းရေး Tablet များ, အကောင်းဆုံးကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အရည်
ကုန်ပစ္စည်းအထူးအသေးစိတ်။ 1PC သို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးပိုပြီး PCs
ပုံပန်းသဏ္ဍာန် စုစည်း Tablet ကို
အာမခံချက်ကာလ5နှစ်များ
အဆိုပါရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူ့ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ ကျေးဇူးပြု. ခွက်.